Ukuphonsa Ngendwayimane, Ukuqeshisa Ngezimoto, Ukuphakamisa Insimbi - Chenli
Ukuphakanyiswa kuketanga kagesi
I-Troelly / Pulley / Magnetic
Umshini Wokucindezela Kwezintambo
Inzuzo Enkulu Yesikali
UChenli ukholelwa ngokuqinile ukuthi intuthuko ayisisekelo ngokuphelele. Sithatha imakethe njengesiqondiso, ngobunjiniyela bukhulisa inzuzo yokuncintisana, kuyilapho inzuzo yokuqagela eqonde kakhulu isezingeni elikhulu nebanga eliphakeme.Funda kabanzi
Ubuchwepheshe Bokusebenza Ngobuchwepheshe
Umzamo wethu wokubambisana usenza ube mkhulu. IChenli ifaka abantu abaningi abanamakhono abanolwazi ngocwaningo, ukuphatha kanye nemakethe. Wonke umuntu unelungelo elifanelekile lokukhuthaza amandla abo. Okuqinisekisa ukuthi ibhizinisi licwaninga umkhiqizo owodwa noma emibili ngonyaka.Funda kabanzi
UChenli uthole i-ISO9001, CE, GS, CCS, izitifiketi, okungajwayelekile embonini efanayo. Okwamanje umshuwalense wethu we-PICC ukhokha umshuwalense wemikhiqizo engama-RMB2000000 njalo ngonyaka.Funda kabanzi
I-Chenli Group enobuchwepheshe bokukhiqiza obusezingeni eliphakeme nethimba lokuphatha, Uhlelo lwanamuhla lokuphathwa kweflethi kanye nemodi yokukhiqiza yekhwalithi yokulawula ikhwalithi, seluphothuliwe ngokuyisisekelo uguquko olusuka ekuphathweni kokulawulwa kokulawulwa kokulawulwa kokuvinjwa.
Amabhizinisi aphatha i-tenet
Ukuphepha Okuningi Ukuthengelwa Okuningi kwe-Chenli
Ifilosofi yenkonzo yamabhizinisi
Amakhasimende alungile naphakade
Umqondo wokuphatha ibhizinisi
Ukuthuthuka okugcizelela, izinzuzo zakho zokuphathwa kwezimboni ezisezingeni eliphakeme, inzuzo yezobuchwepheshe, inzuzo yomkhiqizo, zihlangabezana njalo nezidingo zenkambiso.
Amabhizinisi ukuphatha injongo
Umholi we-rigging management management emisha kanye ne-teknoloji emisha. IC Chenli Group izimisele ukuhlala ime eceleni kwakho, izokwenza amakhasimende weCanli brand abe nengcebo yaphakade.
I-EB WLBING SLINGS
I-Super-low Head Room Electric Chain Hoist
IHSH-X Lever Hoist
I-HYDRAULIC PRESSING MACHINE CLH1000
Inkampani enkulu yeqembu
Izinkampani zokufinyelela ezinhle kakhulu
Ukulungiselela Ngokucophelela, Ukuthwala okungenamkhawulo, Ukuphepha Kuyinkosi
Isilinganiso Esikhulu Inzuzo
Indwayimane kanye nokufakwa
UChenli ophakamisa indwayimane manje useyibhizinisi eliholayo eChina. Futhi sakha indawo yokusebenzela ebanzi kakhulu. UChenli unomugqa ophelele wokukhiqiza usuka ezintweni ezingavuthiwe uye kumikhiqizo eqediwe. Ukucutshungulwa ngakunye kunemisebenzi yokusebenzela ezimele, okwenza ukuphakamisa indwayimane, ibhande le-ratchet, ibhande lokulinganisa imoto kusuka ku-0.5T kuye ku-3000T. Siyakwazi ukuqeda i-oda elikhulu ngokushesha.
UChenli manje useesethi ephelele yemishini yokuhlola efanelekile, eqinisekisa ukuthi singakwazi ukuqiniseka ikhwalithi yokujikeleza kokuzungeza, ukusuka ku-20T kuye ku-3000T, kanye ne-webling sling, kusuka ku-20T kuye ku-50T.
Ukubhekana nezinkinga zezezimali, wonke amakhasimende aphishekela inzuzo ephezulu. Inani lethu le-oda likhuphula ngama-40% uma liqhathaniswa nonyaka owedlule. Kholelwa emandleni weqabane, kholwa kuChenli.
Ukuphakamisa ukunyakaza kuwuhlobo lwethuluzi elilula kakhulu, kungenza umsebenzi wakho ube lula ukuwenza .I-Clhenli yokuphakamisa ukuphakamisa ifakwa ngaphansi kwefektri yokuphakamisa i-clamp okuyiwona fektri yokuqala.I-Chenli ifaka izinombolo zabasebenzi abangochwepheshe bekhwalithi.Super nekhwalithi yokuqinisekisa abasebenzi ukuthi banesimo esingcono nokuphepha. Izingcweti zokuphakamisa i-Chenli zithola idumela elihle ePearl River Delta, eSifundeni saseYangzi River Delta, eNortheast Region ngenxa yokuphakama kwamanani entengo.Njengokuthi umhlinzeki wezimpahla eziqokiwe oqokiwe, sisungula ubudlelwano obude bebhizinisi neShougang Group, iSino-petro.Cecla chenli licwaninge okusha imikhiqizo: Ukuphakamisa izibani uhlobo lwe-SVC, ama-trolleys, ama-pulleys. Sihlinzeke ngomsebenzi we-OEM waseJapan, eFinland njll.
UC Chenli uhlala elandela ukuphepha nekhwalithi yomkhiqizo, futhi akhumbuze abasebenzisi kwinqubo yokusebenzisa ukuthi banake ukuphepha.
Amaketanga amakhulu we-Chenli, singakhiqiza iketanga eligoqiwe, ukuphakamisa (ukudonsa) iketanga, iketanga lemayini, uchungechunge lwezilwane, iketango lokufakwa kwesinxephezelo, uchungechunge lwamathayi kanye nePulasitiki ehlanganisiwe nokunye okuningana nezinhlobo ezingama-300, ezisetshenziswa kabanzi ngezinhloso ezahlukene njengokuphakamisa, ukuphakamisa , ukudonsa, ukupakisha, imayini, ingadi njll.
Ama-Chenli akhiqiza izinhlobo zamaketanga, ezenziwa ngensimbi ye-low-carbon alloy. Banesimilo uma anti-umthelela, umthamo eliphezulu ukulayisha, ductility, elongation.
UChenli G80chain uhlangana ne-DIN5687, DIN5688, standard yaseJalimane, ISO3076. Singakwazi ukucubungula ingaphezulu ngesidingo samakhasimende.
Asifuni isilinganiselo esihle kakhulu. Asiphishekeli ubuningi bama-oda, ubuqiniso, ngokunakekelwa okumangalisayo, ukuqamba okusha, ukunemba, umsebenzi oncomekayo ophakeme kakhulu nentengo, ukufezekisa ukuthandwa kwethu okuhle kwemakethe. Sizoqhubeka nokufakazela imikhiqizo esezingeni eliphakeme, sizama ukuthandwa kakhulu, futhi sizobamba izandla kanye namakhasimende abheke ngandlela thile, afinyelele impumelelo enkulu.
Ukugoqa nokuphakamisa izinsiza eziphelele
Imishini yokusebenza ingaphansi kwefektri entsha yeChenli, Itholakala enkabeni yensimbi eyakhiwe, esifundazweni i-Hebei. Sahlanganyela kunjiniyela onolwazi lweminyaka engamashumi amaningi njengomeluleki wethu kwezobuchwepheshe. Isinyathelo ngesinyathelo sikhiqiza imishini yokusebenza. Ukusuka kumdwebo ngamunye ukuya ngopende siphatha zonke izinyathelo ngokuqinile. Umkhiqizo uyasebenza ngokwengeziwe futhi unamanani wokuncintisana aphakathi, okuletha ukuhleleka okuningi. Ngonyaka ofanayo sikhiqiza futhi sithengise ama-87 amasethi ayengumshini wokucindezela izintambo. Imishini yokusebenza kwemishini ye-Chenli isetshenzisiwe emnyangweni ohlukile futhi yathunyelwa eMalaysia, Singapore, Iran, India njll.
Ukugoqa nokuphakamisa ...
Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane
Imikhiqizo Eshisayo - I-Sitemap Funda kabanzi